လိင်ဆက်ဆံဖို့ ခက်ခဲနေပါသလား – Gentleman Magazine
လိင်ကိစ္စမှာ လိုသလောက် အားမရဘူး ဖြစ်နေပါသလား။ သင်တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ခုခေတ် ယောက်ျားတော်တော်များများဟာလဲ သူတို့လိင်မှုဘဝကို အညွန့်ချိုးခံထားရသလို ခံစားနေရတာပါ။ အဲဒိကိစ္စအတွက် အိပ်ရာထဲမှာ နည်းပညာပစ္စည်း အသုံးများလာတာနဲ့ အဝလွန်နေတာကို အပြစ်ပြောနိုင်ပါတယ်။ တခြားကိစ္စ ပြသနာလေးတွေလဲ ရှိသေးလို့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနည်းတွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
၁. ကိုယ့်ဘာသာ အားမရခြင်း
ယောက်ျားတော်တော်များများဟာ ကိုယ့်ဘာသာ အဝလွန်နေတယ်၊ ပိန်လွန်းနေတယ်၊ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားမကျဘူးလို့ ထင်နေတတ်ကြပြီး အိပ်ရာပေါ်တက်ရမှာ တွန့်ဆုတ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲဒိ ကိုယ့်ဘာသာ အထင်သေးလွန်းမှုဟာ သံသရာ လည်နေတတ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ပါတနာကို သင့်ခန္ဓာကိုယ်က သူကြိုက်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေအကြောင်း မေးကြည့်ပါ။ သူမရဲ့ မှတ်ချက်ကောင်းတွေဟာ သင့်စိတ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကလဲ လိင်ကိစ္စအားအတွက် အရမ်းကောင်းလွန်းတာမို့ အထင်မသေးသင့်ပါဘူး။
၂. အထီးကျန်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးခြင်း
သင် စိတ်အရမ်းကျနေတဲ့အခါမျိုးမှာ လိင်စိတ်လဲ ထိခိုက်သွားတတ်ပါတယ်။ ယောက်ျားတွေဟာ ဘဝအခြေအနေမကောင်းတုန်းမှာ ပါတ်ဝန်းကျင်ကို ရှက်လို့ အထီးကျန်ခံတတ်ပါတယ်။ အထီးကျန်ခြင်းဟာ စိတ်ကျခြင်းအဖြစ် ကူးပြောင်းသွားပြီး လိင်မှုဘဝကို ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်တော့တာပါပဲ။ အဆိုးဆုံးအချိန်တွေဟာ ခဏပဲ ဖြစ်ပြီး နေရောင်ချည်ကို မကြာခင် ပြန်မြင်ရမှာကို သတိရပါ။ လိုအပ်ရင် စိတ်ပညာရှင်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။ ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းတွေကလဲ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကို ဖြေဖျောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အာသာဖြေခြင်းဟာ ပုံမှန် ကျန်းမာရေး မထိခိုက်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပြီး တစ်ခေါက်တစ်လေလောက် လုပ်တာဟာ ပုံမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အာသာဖြေခြင်းဟာ စွဲစေတတ်လို့ အလွန်အကျွံများသွားရင် သင့်လိင်မှုဘဝကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ သင် အာသာဖြေတာ စွဲသွားရင် ပုံမှန် လိင်ကိစ္စဟာ မတိုးတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာ သတိထားပြီး လိင်ဆက်ဆံဖို့ အချိန်တိုင်းကို လက်လွှတ်မခံပါနဲ့။
၄. လုပ်ငန်းခွင်ဘဝ ကြမ်းတမ်းခြင်း
ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ်ချိန်ဇယားတစ်ခုဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝကို ဘယ်လောက် ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်လဲဆိုတာ လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ Overtime တွေ၊ အလုပ်အကြောင်းပဲ စဉ်းစားနေရတာတွေ၊ ပိုပြီးကောင်းအောင် လုပ်နိုင်ဖို့ ဖိအားတွေဟာ လိင်မှုဘဝကို လျစ်လျူရှုမိသွားစေပါတယ်။ အလုပ်နဲ့ အားလပ်ချိန်ကို သေသေချာချာ ခွဲခြားထားတာ အကောင်းဆုံးပါ။ အသက်ရှင်ဖို့ အလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့ အသက်ရှင်နေတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိရပါ။
၅. လူကြီးကား စွဲခြင်း
မိန်းမတော်တော်များများက သူတို့ရဲ့ အဖောဟာ လူကြီးကားတွေကို စွဲလမ်းနေလို့ တကယ့်လက်တွေ့မှာ စိတ်မဝင်စားဘူးလို့ မကျေမနပ် ပြောထားကြပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ လူကြီးကားတွေ ပျံလာတာနဲ့ ယောက်ျားတော်တော်များများရဲ့ လိင်မှုဘဝတွေ ရေတိမ်နစ်ကုန်ပါတယ်။ လူကြီးကားကြည့်မယ့် အချိန်တွေကို သင့်ချစ်သူနဲ့ လက်တွေ့ ကုန်ဆုံးစေလိုက်ပါ။ ပြောင်းလဲမှုတွေကို တွေ့လာရပါမယ်။
လိငျကိစ်စမှာ လိုသလောကျ အားမရဘူး ဖွဈနပေါသလား။ သငျတဈယောကျထဲ မဟုတျပါဘူး။ ခုခတျေ ယောကျြားတျောတျောမြားမြားဟာလဲ သူတို့လိငျမှုဘဝကို အညှနျ့ခြိုးခံထားရသလို ခံစားနရေတာပါ။ အဲဒိကိစ်စအတှကျ အိပျရာထဲမှာ နညျးပညာပစ်စညျး အသုံးမြားလာတာနဲ့ အဝလှနျနတောကို အပွဈပွောနိုငျပါတယျ။ တခွားကိစ်စ ပွသနာလေးတှလေဲ ရှိသေးလို့ ရငျဆိုငျဖွရှေငျးနညျးတှကေို ဖျောပွထားပါတယျ။
၁. ကိုယျ့ဘာသာ အားမရခွငျး
ယောကျြားတျောတျောမြားမြားဟာ ကိုယျ့ဘာသာ အဝလှနျနတေယျ၊ ပိနျလှနျးနတေယျ၊ ခန်ဓာကိုယျ အခြိုးအစားမကဘြူးလို့ ထငျနတေတျကွပွီး အိပျရာပျေါတကျရမှာ တှနျ့ဆုတျနတေတျပါတယျ။ အဲဒိ ကိုယျ့ဘာသာ အထငျသေးလှနျးမှုဟာ သံသရာ လညျနတေတျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ ပါတနာကို သငျ့ခန်ဓာကိုယျက သူကွိုကျတဲ့ အစိတျအပိုငျးတှအေကွောငျး မေးကွညျ့ပါ။ သူမရဲ့ မှတျခကျြကောငျးတှဟော သငျ့စိတျကို မွှငျ့တငျပေးနိုငျပါတယျ။ ကိုယျကာယလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာကလဲ လိငျကိစ်စအားအတှကျ အရမျးကောငျးလှနျးတာမို့ အထငျမသေးသငျ့ပါဘူး။
၂. အထီးကနျြခွငျး၊ စိတျဖိစီးခွငျး
သငျ စိတျအရမျးကနြတေဲ့အခါမြိုးမှာ လိငျစိတျလဲ ထိခိုကျသှားတတျပါတယျ။ ယောကျြားတှဟော ဘဝအခွအေနမေကောငျးတုနျးမှာ ပါတျဝနျးကငျြကို ရှကျလို့ အထီးကနျြခံတတျပါတယျ။ အထီးကနျြခွငျးဟာ စိတျကခြွငျးအဖွဈ ကူးပွောငျးသှားပွီး လိငျမှုဘဝကို ဝငျရောကျနှောကျယှကျတော့တာပါပဲ။ အဆိုးဆုံးအခြိနျတှဟော ခဏပဲ ဖွဈပွီး နရေောငျခညျြကို မကွာခငျ ပွနျမွငျရမှာကို သတိရပါ။ လိုအပျရငျ စိတျပညာရှငျနဲ့ တိုငျပငျပါ။ ကိုယျကာယလကေ့ငျြ့ခနျးတှကေလဲ စိတျဓာတျကခြွငျးကို ဖွဖြေောကျပေးနိုငျပါတယျ။
အာသာဖွခွေငျးဟာ ပုံမှနျ ကနျြးမာရေး မထိခိုကျတဲ့ ကိစ်စတဈခုပဲ ဖွဈပွီး တဈခေါကျတဈလလေောကျ လုပျတာဟာ ပုံမှနျပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ အာသာဖွခွေငျးဟာ စှဲစတေတျလို့ အလှနျအကြှံမြားသှားရငျ သငျ့လိငျမှုဘဝကို ထိခိုကျစပေါတယျ။ သငျ အာသာဖွတော စှဲသှားရငျ ပုံမှနျ လိငျကိစ်စဟာ မတိုးတော့ပါဘူး။ ကိုယျ့ဘာသာ သတိထားပွီး လိငျဆကျဆံဖို့ အခြိနျတိုငျးကို လကျလှတျမခံပါနဲ့။
၄. လုပျငနျးခှငျဘဝ ကွမျးတမျးခွငျး
ကွမျးကွမျးတမျးတမျး ပငျပငျပနျးပနျး အလုပျခြိနျဇယားတဈခုဟာ လူတဈယောကျရဲ့ ဘဝကို ဘယျလောကျ ဖကျြဆီးပဈနိုငျလဲဆိုတာ လူတိုငျးသိကွပါတယျ။ Overtime တှေ၊ အလုပျအကွောငျးပဲ စဉျးစားနရေတာတှေ၊ ပိုပွီးကောငျးအောငျ လုပျနိုငျဖို့ ဖိအားတှဟော လိငျမှုဘဝကို လဈြလြူရှုမိသှားစပေါတယျ။ အလုပျနဲ့ အားလပျခြိနျကို သသေခြောခြာ ခှဲခွားထားတာ အကောငျးဆုံးပါ။ အသကျရှငျဖို့ အလုပျလုပျတာဖွဈပွီး အလုပျလုပျဖို့ အသကျရှငျနတော မဟုတျဘူးဆိုတာ သတိရပါ။
၅. လူကွီးကား စှဲခွငျး
မိနျးမတျောတျောမြားမြားက သူတို့ရဲ့ ပါတနာဟာ လူကွီးကားတှကေို စှဲလမျးနလေို့ တကယျ့လကျတှမှေ့ာ စိတျမဝငျစားဘူးလို့ မကမြေနပျ ပွောထားကွပါတယျ။ အငျတာနကျပျေါမှာ လူကွီးကားတှေ ပြံလာတာနဲ့ ယောကျြားတျောတျောမြားမြားရဲ့ လိငျမှုဘဝတှေ ရတေိမျနဈကုနျပါတယျ။ လူကွီးကားကွညျ့မယျ့ အခြိနျတှကေို သငျ့ပါတနာနဲ့ လကျတှေ့ ကုနျဆုံးစလေိုကျပါ။ ပွောငျးလဲမှုတှကေို တှလေ့ာရပါမယျ။
Previous: ဘဝမှာ အောင်မြင်စေဖို့အတွက် ကိုယ်နေကိုယ်ထား လမ်းညွှန်ချက်များ
Next: တံတားတွေဆောက် လမ်းတွေဖောက်